Full fonosina Exchangeable Worktable FAA-4020CE - China Dongguan Glorystar Laser
Product Features ● tanteraka fefy manodidina ny famolavolana, hampihenana taratra tamin'ny laser ary tsy misy ratra mekanika. ● mandany ny exchangeable worktable mba hamonjy Loading sy mampidina entana avy ny fotoana, sy ny fahaiza-miasa mahomby chieve asa ambony. ● Avo indrindra-mitoto vary fitaovana sy ny fitaovana fitoeran'entana, ambony ambany tabataba sy marina tsara. ● SMC pneumatic votoatiny, mahay fanaraha-maso mba tonga lafatra-ambany fanerena pinching. Azo ampiharina be mpampiasa amin'ny orinasa isan-karazany ny vokatra vy toy ny orinasa fanodinana taratasy metaly, cookware sy ...
● SMC pneumatic votoatiny, mahay fanaraha-maso mba tonga lafatra-ambany fanerena pinching.
Laser fahefana 1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W, 6000W (tsy voatery)
miasa faritra 4000 * 2000mm
Fahefana amin'ny ankapobeny fanjifàna <18KW
Transmission maody Pinion sy fitoeran'entana, Double Driver
lafiny: 10000 * 3600 * 2000
Previous: Full fonosina Exchangeable Worktable FAA-6015CE
Manaraka: Open Type Fibre Metal Laser manapaka Machine FAA-3015E
2000w Fibre Laser Cutting
2kw Fibre Laser Cutting
F-6018T Tube / Pipes Fibre Laser Cutter
FAA-3015G Fibre Laser manapaka Machine Fa Metal ...